RỤGHARỊA KỌMPUTA, LAPTỌỌPỤ - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Otu esi Malitegharịa ekwentị (laptọọpụ) ma ọ bụrụ na ọ na-eme ngwa ngwa ma ọ bụ na-eme ka ọ daa
Ọ nwere ike ịdị mkpa iji regharịa kọmputa maka ọtụtụ ihe kpatara ya: dịka ọmụmaatụ, ka mgbanwe ma ọ bụ ntọala na Windows OS (nke ị gbanwere n'oge na-adịbeghị anya) nwere ike ịmalite; ma ọ bụ mgbe ị wụnye ọkwọ ụgbọala ọhụrụ; nakwa na ebe ndị kọmputa na-amalite ịkwụsị ma ọ bụ kpọgidere (ihe mbụ na ọbụna ọtụtụ ọkachamara na-atụ aro ime).
Eziokwu, anyị ga-ekweta na nsụgharị nke Windows ugbu a ga-amaliteghachi ma ọ bụ obere, ọ bụghị dị ka Windows 98, dịka ọmụmaatụ, ebe ọ bụla sneeze (n'ụzọ nkịtị) ị ghaghị ịhazigharịa igwe ...
N'ozuzu, post a bụ maka ndị ọrụ novice, n'ime ya, m chọrọ imetụ ọtụtụ ụzọ m ga esi esi gbanyụọ ma malitegharịa kọmputa (ọbụnadị mgbe ikpe na usoro anaghị arụ ọrụ).
1) Ụzọ kpochapụla isi malitegharịa PC gị
Ọ bụrụ na START menu mepee ma òké "na-agba" na nyocha ahụ, gịnị kpatara ị ga - eji gbalịa ịmalitegharịa kọmputa na ụzọ kachasị? N'ozuzu, enweghi ike ikwu okwu banyere: mepee menu START ma họrọ mpaghara mmechi - wee site na nhọrọ atọ a nyere, họrọ otu ị chọrọ (lee fig 1).
Fig. 1. Windows 10 - Mkpuchi / Malitegharịa ekwentị
2) Malitegharịa na desktọọpụ (dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na òké ahụ adịghị arụ ọrụ, ma ọ bụ menu START).
Ọ bụrụ na òké ahụ adịghị arụ ọrụ (dịka ọmụmaatụ, onye nchịkọta adịghị agagharị), mgbe ahụ, kọmputa (laptọọpụ) nwere ike gbanyụọ ma ọ bụ malitegharịa site na iji keyboard. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike pịa Mmeri - menu kwesiri imeghe Malite elu, ma na ya ahọrọlarị (jiri akụ na keyboard) bọtịnụ mmechi. Mana mgbe ụfọdụ, menu START amaliteghị imeghe, ya mere, ihe ị ga-eme n'okwu a?
Pịa bọtịnụ bọtịnụ Alt ma F4 (ndị a bụ mkpọchi imechi windo). Ọ bụrụ na ị nọ na ngwa ọ bụla, ọ ga-emechi. Ma ọ bụrụ na ị nọ na desktọọpụ, mgbe ahụ, windo ga-apụta n'ihu gị, dị ka fig. 2. Na ya, na enyemaka onye na-agba agba ị nwere ike ịhọrọ otu ihe, dịka ọmụmaatụ: reboot, mechie, wepụ, gbanwere onye ọrụ, wdg, ma jiri bọtịnụ rụọ ya Tinye.
Fig. 2. Maliteghachi na desktọọpụ
3) Malitegharịa iji akara iwu
Ịnwere ike ịmalitegharịa kọmputa gị site na iji akara iwu (ịkwesịrị ịbanye otu iwu).
Iji malite usoro iwu, pịa mkpọchi mkpọchi. RIN na R (na Windows 7, akara iji gbuo bụ dị na menu START). Ọzọ, tinye iwu ahụ Cmd ma pịa Tinye (lee fig fig 3).
Fig. 3. Gbaa akara iwu ahụ
Na akara iwu, banyeshutdown -r -t 0 ma pịa Tinye (lee fig 4). Ntị! Kọmputa ahụ ga-amalitegharịa n'otu oge ahụ, ngwa niile ga-emechi, ma data echekwaghị efu!
Fig. 4. shutdown -r -t 0 - Malitegharịa ekwentị ozugbo
4) Mkpuchi mberede (anaghị atụ aro ya, mana ihe ị ga-eme?)
N'ozuzu, usoro a kachasị mma ga-adịru. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, enweghi ike ịnweta ozi echekwara, mgbe ịmịgharịrị n'ụzọ dị otú a - mgbe Windows ga-elele disk maka njehie na ihe ndị ọzọ.
N'ihe banyere usoro usoro kpochapụwo nke kachasị njọ, na-emekarị, bọtịnụ Tọgharia (ma ọ bụ reboot) dị n'akụkụ bọtịnụ ike PC. Na ụfọdụ usoro, iji pịa ya, ịkwesịrị iji pen ma ọ bụ pensụl.
Fig. 5. Echiche nke oge nke usoro usoro
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ịnweghị ntinye Reset, ịnwere ike ịnwa ijide ya maka 5-7 sekọnd. bọtịnụ ike N'okwu a, na-emekarị, ọ ga-emechibido (gịnị ma ị malitegharịa?).
I nwekwara ike gbanyụọ kọmputa site na iji bọtịnụ on / off, na-esote netwọk netwọk. Ma, ma ọ bụ ka wepụ plọg site na ntaneti (nsụgharị kachasị ọhụrụ na ihe a pụrụ ịdabere na ya niile ...).
Fig. 6. Ogwe usoro - anya azụ
Na laptọọpụ, ọtụtụ mgbe, enweghị ọkachamara. bọtịnụ reboot - omume nile na-arụ site na bọtịnụ ike (ọ bụ ezie na ụfọdụ ụdị nwere igbe zoro ezo nke enwere ike ịme ihe site na iji pensụl ma ọ bụ mkpịsị akwụkwọ.) A na-ahụkarị ma ọ bụ n'azụ laptọọpụ ma ọ bụ n'okpuru ụdị mkpuchi).
Ya mere, ọ bụrụ na laptọọpụ ahụ na-agba oyi ma ọ dịghị emeghachi ihe ọ bụla - nani jide bọtịnụ ike maka 5-10 sekọnd. Mgbe sekọnd ole na ole - laptọọpụ, na-emekarị, "ịchọọ" ma gbanyụọ. Mgbe ahụ i nwere ike igbanwe ya dị ka ọ dị na mbụ.
Fig. 7. Ogwe Ike - Laptọọpụ Lenovo
Ọzọkwa, ịnwere ike gbanyụọ laptọọpụ ahụ site na ịtọpụ ya ma wepu batrị (ọ na-ejikarị ya na otu ụzọ, lee fig fig 8).
Fig. 8. Ndabere batrị
5) Otu esi emechi ngwa ngwa
Ngwa nwere ike "agaghị enye gị" ịmalitegharịa PC gị. Ọ bụrụ na kọmputa gị (laptọọpụ) anaghị amaliteghachi ma ịchọrọ ịgbakọ ya iji chọpụta ma ọ bụrụ na e nwere ngwa a jụrụ oyi, ị nwere ike iji ya gbakọọ ya na njikwa ọrụ: dịka rịba ama na "agaghị aza" ga-ede ya na ihu ya (lee fig 9. ).
Na-egosi! Iji tinye njikwa ọrụ - jide Ctrl + Shift + bọtịnụ Esc (ma ọ bụ Ctrl Alt Del).
Fig. 9. Ngwa Skype anaghị azaghachi.
N'ezie, iji mechie ya - họrọ ya n'otu njikwa ọrụ ahụ wee pịa bọtịnụ "Clear Task", wee gosi na ịhọrọ. Site n'ụzọ, niile data dị na ngwa ahụ ị ga-emechi agaghị echekwa ya. Ya mere, na ụfọdụ, ọ na-adaba na ichere, ikekwe ngwa ahụ mgbe nkeji 5-10 gasịrị. kwadoro ma ị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ (n'ọnọdụ a, ana m akwado iji zọpụta data niile na ya ozugbo).
M kwadoro otu isiokwu gbasara otu esi emechi ngwa ma ọ bụrụ na ọ na-arapara ma ọ dịghị emechi. (isiokwu ahụ na-enwetakwa otú e si emechi ihe ọ bụla usoro):
6) Otu esi malitegharia komputa na onodu nchedo
Nke a dị mkpa, dịka ọmụmaatụ, mgbe ọkwọ ụgbọala na - arụ ọrụ. Ma ugbua, mgbe ị na-agbanye ma bugharịa Windows, ị na-ahụ ihuenyo anụnụ anụnụ, maọbụ na ị hụghị ihe ọbụla :). N'okwu a, ị nwere ike ịba n'ime ọnọdụ dị mma (ọ na-eburu naanị software kachasị mkpa ị chọrọ ịmalite PC) wee wepụ ihe niile na-enweghị isi!
N'ọtụtụ ọnọdụ, iji mee ka igodo Windows gosipụta, ịkwesiri igodo igodo F8 mgbe ị gbanyechara kọmputa (ọ ka mma ịpị ya ugboro 10 n'usoro mgbe PC na-ebugharị). Ọzọ, ị ga-ahụ otu menu dị na fig. 10. Mgbe ahụ ọ na-anọgide na ịhọrọ ọnọdụ achọrọ ma nọgide na nbudata.
Fig. 10. Windows buut nhọrọ na mma mode.
Ọ bụrụ na ọ naghị akwalite (dịka ọmụmaatụ, ịnweghị ndepụta a), ana m akwado ịgụ isiokwu na-esonụ:
- ederede banyere otu esi abanye n'ọnọdụ dị mma [dị mkpa maka Windows XP, 7, 8, 10]
Enwere m ya niile. Ezigbo onye ọ bụla!